Fitsidihana… hitondra sy hamela ako tsara | NewsMada
Fitsidihana… hitondra sy hamela ako tsara
Ny fitsidihana apostolika hataon’ny papa François no zava-dehibe eto amin’ny firenena amin’izao faran’ny herinandro izao: arahaba soa, arahaba tsara. Zava-dehibe eo amin’ny lafiny finoana io, eo amin’ny lafiny diplaomatika koa.
Hatramin’ny fotoana farany, tsy mitsahatra ny fiomanana sy ny fiambenana: fitandroana ny fandriampahalemana sy ny filaminana, ny fandaminana sy ny fanadiovana… Tsy latsaka amin’izany ny lafiny finoana sy fanahy.
Na ahoana na ahoana, tsy tokony havela handalo fotsiny izao fitsidihana manan-danja sy manan-tantara izao. Efa ela ny niomanana sy ny nanomana azy, andaniana vola sy fotoana… Mpamafy fiadanana sy fanantenana ny papa.
Hitondra sy hamela akony tsara sy mahasoa tokoa eto amin’ny firenena izao fitsidihana izao? Eo amin’ny firenena, isan-tokantrano, isam-batan’olona… Ao anatin’izany ny fitondram-panjakana, ny fiangonana, ny fiarahamonina…
Hisy ve, ohatra, ny firaisankina tanteraka eo amin’ny samy Malagasy… iray ihany? Tsy ho tratran’ny zarazarao anjakana amin’ny afitsoky ny vahiny sasany. Hahasaro-piaro tokoa, ohatra, ny tanindrazana sy ny fiandrianam-pirenena?
Raha mampiray hina sy mampiray fo ny fitsidihan’ny papa, tsy havela handalo fotsiny. Inona ny akony sy ho vokany? Na eo amin’ny lafiny fiainam-panahy sy toe-po izany, na ny saina sy fitondrantena… Izy, mandalo fa isika, mitoetra.
Tsy ho faipaika fa ho ventiny, tsy ho raodraotra fa ho herotra ny fitandroana filaminana sy fandriampahalemana, ohatra: ho asa mitohy sy maharitra. Toy izany koa ny fandrindrana ny fifamoivoizana, ny fandaminana sy ny fanadiovana…
Tsy mendrika izany isan’andro mandavantaona ve ny Malagasy, na tsy misy vahiny be aza? Mahay mandray vahiny ny Malagasy fa tsy ho amin’izany ihany vao hikoropaka sy hahalala hikarakara sy hanaja tena. Zava-dehibe izay, raha…
Isika no erany fa ny ataon’ny tsirairay ihany no mahasoa na maharatsy ny firenena. Ao anatin’ny firaisankina izany, fihavanana, fifanampiana… Mba ho tena ho amin’ny fanantenana sy ny fiadanana tokoa? Aleo hery àry fa ho tonga vahiny…